Hetsiky ny Olompirenena: Iray mamoa zato (tantara an-tsary)
2016-05-07 @ 14:46 in Andavanandro
Zoma maraimbe 29 avrily 2016, nisy lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona teny amin'ny vahilavan'Andohatapenaka. Fiara fitaterana roa no nifandona tamin'izany loza izany. Noheverina fa mba hitandrina ny mpitondra fiara fitaterana raha mandre izany loza izany kanjo tsy izay no nitranga. Zoma harivan'io ihany, nahafatesana zaza maro indray tamin'ny lalampirenena fahaefatra, teny Mahitsy. Mpianatra 6 tamin'ny sekoly iray eny Ambohimanarina no maty tamin'izany loza izany, fiara fitaterana nivarina tany amin'ny hantsana indray ity loza faharoa ity. 12 ny isan'ny maty tamin'ireo loza notononina ireo ary zaza 7 na 8 taona ny enina maty tamin'ireo loza ireo.
Tohina avokoa izay nandre, indrindra fa tia zanaka ny Malagasy ary maro ireo ray aman-dreny no tsy mahazaka nandre ilay vaovao fahafatesan-jaza satria mieritreritra ny zanany avy hatrany. Tao anatin'izany fanafintohinana izany no namoaka sata tao amin'ny Facebook tao amin'ny vondrona Fifamoivoizana eto Madagasikara (FEM) ny mpiserasera iray antsoina hoe Serge Rabetrano.
Ho eo Ambohijatovo, afovoan-tanànan'Antananarivo, hiakanjo mainty sy hitondra sora-baventy izy, hanaitra ny tompon'andraikitra handray fepetra faran'izay henjana momba ireo taxibe ny Asabotsy amin'ny sivy maraina ary nanentana ny hafa hanatevin-daharana.
Tonga ny Asabotsy tamin'ny sivy ora, efa ny mpitandro ny filaminana misahana ny fihetsiketsehana sy ny rotaka no tonga aloha teo an-toerana, ho avy ve izy ary hijoro? Ho sahy hitana ny teniny manoloana ireo EMMO-Reg ve izy? Tsy ela anefa fa indreo izy nijoro ampita anoloan'ny tsangambaton'ny maherifo. Nahasahy nijoro izy! Hipetraka ho tantara sahady ny anarany, olon-tsotra izy ary vao ora sivy izay no nanoratany sata tao amin'ny Facebook.
Nanao ahoana ny isan'ny mpanaraka?
Na dia nahazo sitraka mihoatra ny arivo aza ny sata nosoratany dia tsy ampy folo akory ireo nahasahy sehatra fa matahotra an-dry zalahy be baoty avokoa. Fohy loatra ny fotoana niomanana, hoy ny tsikera fa asio fanindroany.
Tapakevitra ihany na dia efa nihaodihaody aza ny bebasy
Tsy nisy miaramila na zandary nihazakazaka avy hatrany hisambotra kay. Fa ahoana?
Dia ry zareo irery ve no ho eo hatramin'ny farany?
Indry ny mpakasary iray nilaza fa hanatevindaharana izy.
Indro koa ny fianakaviana kely iray fa nanatevin-daharana. Efa nilaza ny ho avy mihitsy koa i Madama kely.
Hatreo ny sary azoko tamin'ity andro ity fa tsy maintsy nanohy ny asako aho. Nisy ny lahatsary noraisina fa nisy fahasimbana ilay izy (tsy nety navoaka tao amin'ny fakantsary hatramin'izao!) izay niresadresahana tamin'ny tompon-kevitra.
Tapaka indray fa amin'ny alakamisy ny fotoana manaraka, andro tsy iasana io ary atao avokoa ny taratasy fangatahana ilaina hanaovana diabe mangina. Alahady tamin'ny roa ka hatramin'ny telo ny fotoana omena ireo hanao sonia fangatahana eny amin'ny ambaratongam-pahefana ary eny Ankorondrano akaikin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy no toerana ihaonana amin'izany.
Alatsinainy maraina, radio tsy miankina iray, RDJ manana ny fandaharana rivotra no nandrenesana avy amin'ny mpanentana iray sady mpanao hatsikana, Eric, ny hisian'ny hetsika diabe hotontosaina ny alakamisy. Tsy mbola vita ny fangatahana tamin'izany ora sy andro izany. Nandrenesana kely hatrany na ny talata na ny alarobia momba ilay hetsika.
Mpanentana iray fantatra amin'ny hoe Goth nilaza fa hiainga avy eny Talatamaty handeha an-tongotra izy no hizotra ho eny Analakely birao misy ny RDJ, hanentana ireo taxibe, ary hiaraka amin'ny diabe koa ny alakamisy amin'ny iray ora folakandro. Ela ny ela, tonga ihany ilay fotoana. Ny azo lazaina dia iray izy no niainga fa nihoatra ny zato kosa no nanao ilay hetsika tamin'ny andron'ny alakmisy andro fiakarana 5 mey 2016. Aleo ny sary sy ny lahatsary no hilaza azy.
Ireo nanentana tamin'ny radio tsy miankina iray.
Fantatry ny mpanao gazety avy hatrany ilay nitarika ny hetsika tamin'ny Asabotsy heriny.
Ireo vitsy mpikambana ao amin'ny Wake Up Madagasikara, fikambanana hafa mpanao hetsik'olompirenena tahaka izao ihany koa.
Ireo fiara hanaraka ny diabe
Teo amin'ny toerana nifamotoana alakamisy
Fianakaviana iray anisan'ny nana-manjò tamin'ny lozam-pifamoivoizana
Zoro hafa ijerena ireo vonona ny hanao diabe
Nisy fotoana niaraka nitolona politika, dia nisy fotoana ihany koa niaraka teny amin'ny hetsiky ny Wake Up Madagascar noho ny resaka angovo. Dia tafahoana teto indray!
Skoto vonona ny hanao diabe, fa aiza ny hafa?
Mpanentana sady mpanao hatsikana roa, Global Voices roa, Wake Up ny hafa...
Mpaka sary alaina sary maka zoro mbola ho hitantsika angamba
Miaraka amin'ny politisiana iray
Ireo mpitarika ny hetsika
Zokiolona iray nanolo-tena hitari-bavaka mialoha ny hiaingana
Ankohonana iray nivonona ny hanao diabe
Niainga ny Diabe
Fa mba iza izany no lasa tompon'ity tokotany malalaka be voafefy ity? Azafady fa Hors sujet!
Lahatsary somary mamehy ny fizotran'ny diabe. Nahagaga ny mpamangy ny nandre hira tany ambadika tany. Toa hira fihantsiana. Tsy azo natsahatra kely ve? Sao dia manody?
Efa tsy izaho intsony no naka ny sary noho ny asa tsy maintsy tanterahina indray!
Ataoko fa nisy ireo nanatevin-daharana teny antenatenan-dalana.
Nifandamina kely indray aloha alohan'ny hahatongavana.
Izay sy izay ny fandehany!
Jentilisa 7 mey 2016